Tonon-kiran'i Solomona – 2trondro
Home / Baiboly / Testamenta Taloha / Tonon-kiran'i Solomona
Tonon-kiran'i Solomona 1
1:1 Ampakarina: Enga anie izy hanoroka ahy amin'ny fanoroham-vavany.
1:2 Mpampakatra amin'ny Ampakarina: Dia be no tsara noho ny divay ny nono, fragranced amin'ny zava-manitra tsara indrindra.
1:3 Ampakarina ny Mpampakatra: Ny anaranao menaka izay efa nampidina; noho izany, ny ankizivavy ny nitiavako anareo. Taomy aho handroso.
1:4 Chorus ny ampakarina: Isika, dia hihazakazaka hanaraka anao any ny hanitry ny zava-manitrao.
1:5 Ampakarina ho Chorus: Ary ny mpanjaka efa nitondra ahy ho any an-storerooms.
1:6 Chorus ny ampakarina: Isika Hifaly sy hiravoravo aminao, mahatsiaro ny nononao mihoatra noho ny divay.
1:7 Mpampakatra amin'ny Ampakarina: Ny marina tia anao.
1:8 Ampakarina ho Chorus: Ry zanakavavin'i Jerosalema: Mainty aho, fa shapely, toy ny lain'ny Kedara, toy ny lain'ny Solomona.
1:9 Aza miahiahy fa Izaho no maizina, fa ny masoandro efa nanova ny loko.
1:10 Ny zanaky ny reniko no niady tamiko. Efa nanao ahy ny mpiandry ny tanim-boaloboka. Ny tanim-boaloboko aho ny tsy nitandrina.
1:11 Ampakarina ny Mpampakatra: Hita ho ahy, ianao ilay tian'ny fanahiko, izay ahi-maitso, izay nipetraka teny amin'ny mitataovovonana, fandrao no nanombohako ny mirenireny araka ny andian'ny namanao.
1:12 Mpampakatra amin'ny Ampakarina: Raha toa ianao tsy mahalala, Ry tsara tarehy indrindra amin'ny vehivavy, dia hivoaka ka tsy manaraka ny dian'ny ny ondry aman'osy, ary ny ahi-maitso ny tanora osy afa-tsy ny lain'ny mpiandry ondry.
1:13 Ry tompokovavy havako, Efa ampitahaina anao ny miaraka amin'ny mpitaingin-tsoavaly manohitra ny kalesin'i Farao.
1:14 Ny takolany dia tsara tarehy, toy ny an'ny domohina. Ny vozonao dia tahaka ny bejeweled vozon'akanjoko.
1:15 Chorus ny ampakarina: Dia hamolavola ho anao rojo volamena, mitendro amin'ny reddened volafotsy.
1:16 Ampakarina ho Chorus: Raha ny mpanjaka naka amin'ny fitsaharany, ny menaka manitra naniraka ny fofona.
1:17 Ny malalako dia miora iray trotroana ho ahy. Aoka hitoetra eo an-tratrako.
1:18 Ny malalako dia ny sampahom-boaloboka amiko Chypre, any an-tanimbolin'i-Gadi.
1:19 Mpampakatra amin'ny Ampakarina: Indro, tsara tarehy ianao, Ry tompokovavy havako. Indro, tsara tarehy ianao. Ny masonao dia ny an'ny voromailala.
1:20 Ampakarina ny Mpampakatra: Indro, tsara ianao, O ry malalako, ary tsara tarehy. Ny fandriana no miroborobo.
1:21 Mpampakatra amin'ny Ampakarina: Ny hazo ny trano dia ny sedera; ny tafo dia ny hazo kypreso.
Tonon-kiran'i Solomona 2
2:1 Ampakarina: Aho ny vonin-javatra any an-tsaha sy ny lisy eny amin'ny lohasaha mideza.
2:2 Mpampakatra: Toy ny lilia eo amin'ny tsilo, dia toy izany ny tiany eo amin'ny zazavavy iray.
2:3 Ampakarina ho Chorus: Toy ny hazo poma amin'ny hazo any an'ala, dia toy izany ny malalako eo amin'ny zatovo. Dia nipetraka teo ambanin'ny aloky ny olona izay naniry, ary ny voany dia mamy ao am-bavako.
2:4 Dia nitondra ahy ho any amin'ny storeroom ny divay. Ary nanendry ny fitiavana mba ato anatiko.
2:5 Tohanantsika ahy amin'ny voninkazo. Hanidy aho in amin'ny paoma. Fa reraka amin'ny fitiavana.
2:6 Aoka ny tànany ankavia ambanin'ny lohako, Ary ny tànany ankavanana dia hanaiky ahy.
2:7 Mpampakatra ny Chorus: I hamatotra anao amin'ny fianianana, Ry zanakavavin'i Jerosalema, araka ny manao sy ny stags any an-tsaha, tsy mba hanelingelina na mamoha ny malala, dia fa raha mbola tiany izy.
2:8 Ampakarina ho Chorus: Ny feon'ny malalako! Indro, Tonga izy, mitsambikina eny an-tendrombohitra, mitsambikina manerana ny havoana.
2:9 Ny malalako dia tahaka ny Doe sy tahaka ny diera tanora.
2:10 The, dia mitsangana mihoatra noho ny rindrina, mijery eo am-baravarankely, nijery ny alalan 'ny lattices.
2:11 The, malalako miteny amiko:
2:12 Mpampakatra amin'ny Ampakarina: Mitsangàna, haingana, ry tiako, izay ny, ny shapely iray, ary mialoha.
2:13 Ny ririnina ankehitriny lasa; ny orana efa nihena ka lasa.
2:14 Ny voninkazo no niseho amin'ny tanintsika; ny fotoana fanetezam-boaloboka ny efa tonga. Ny feon 'ny domohina efa re amin'ny tanintsika.
2:15 Ny aviavy no nitondra nivoaka ny maitso aviavy; ny voninkazo voaloboka hamoriako ny fofona. Mitsangàna, ry tiako, ny iray marani-tsaina, ary mialoha.
2:16 Ry voromailalako ao amin'ny tsefatsefaky ny harambato, ao amin'ny lavaka amin'ny manda, manambara amiko ny tavanao. Aoka ny feonao hatanjaka amin'ny tsofiko. Fa ny feonao no mamy, ary ny tavanao no tsara tarehy.
2:17 Chorus ny Mpampakatra sy ny Ampakarina: Hisambotra ho antsika dia ireo amboahaolo madinika, izay ravana ny voaloboka; noho ny tanim-boalobony efa Niroborobo.
2:18 Ampakarina ho Chorus: Ny malalako dia ho ahy, ary Izaho ho azy. Izy saha fiandrasana eny amin'ny lilia, mandra-pihavin'ny andro miakatra sy ny aloka mandà.
2:19 Ampakarina ny Mpampakatra: Miverena, O ry malalako. Ho toy ny Doe, ary toy ny diera tanora eny an-tendrombohitra be hantsana ianao.
Tonon-kiran'i Solomona 3
3:1 Ampakarina: Teo am-pandriako, nandritra ny alina, Nitady azy aho, ilay tian'ny fanahiko. Nitady azy aho,, dia tsy nahita azy.
3:2 Izaho hitsangana, ary Izaho dia manao anaty boribory ny alalan 'ny tanàna. Ny alalan 'ny lafiny arabe sy ny làlam-, , Hitady ilay tian'ny fanahiko. Nitady azy aho,, dia tsy nahita azy.
3:3 Ny mpiambina izay mitandrina eny an-tanàna aho: "Efa nahita Azy tian'ny fanahiko?"
3:4 Rehefa efa handalo azy kely, Hitako ilay tian'ny fanahiko. I nihazona azy, ka tsy halefako, mandra aho hitondra azy ho any an-tranon'ny, dia any amin'ny efi-tranon'ilay niteraka ahy.
3:5 Mpampakatra ny Chorus: I hamatotra anao amin'ny fianianana, Ry zanakavavin'i Jerosalema, araka ny manao sy ny stags any an-tsaha, tsy mba hanelingelina na mamoha ny malala, mandra-tiany.
3:6 Chorus ny Mpampakatra: Fa iza io, izay niakatra tany an-efitra, tahaka ny tehina ny setroka avy tamin'ny aromatics ny miora, ary ny ditin-kazo manitra, ary ny vovoka ny mpangaroharo zava-manitra?
3:7 Chorus ny ampakarina: The, enim-polo matanjaka, avy ny mafy rehetra amin'ny Isiraely, mijoro fiambenana amin'ny ny fandriana nandriany tamin'ny Solomona,
3:8 rehetra mitana sabatra sy tsara ofana amin'ny ady, samy ny fitaovam-piadiana eo am-balahany, noho ny tahotra amin'ny alina.
3:9 Ampakarina ho Chorus: Solomona mpanjaka nanao seza fiandrianana ny tenany ho azo entina avy amin'ny hazo avy any Libanona.
3:10 Ary nanao ny andry volafotsy, ny nipetraka tany amin'ny volamena, ny fiakarana ny volomparasy; ny afovoany nanaronany tsara, amin'ny fitiavana ho an'ny zanakavavin'i Jerosalema.
3:11 Ry zanakavavin'i Ziona, handeha sy hahita an'i Solomona mpanjaka amin'ny diadema izay nasatro-dreniny azy, amin'ny andro espousal, tamin'ny andro mahafaly ny fony.
Tonon-kiran'i Solomona 4
4:1 Mpampakatra amin'ny Ampakarina: Inona no tsara tarehy ianao, ry tiako, Inona no tsara tarehy ianao! Ny masonao dia ny an'ny voromailala, afa-tsy zavatra takona ao anatin'ny. Ny volonao dia tahaka ny ondry aman'osy ny osy, izay hiakatra eny an-tendrombohitra Gileada.
4:2 Ny nifinao dia tahaka ny ondry ny ondry voahety, izay niakatra avy eo amin'ny fampandroana, ny tsirairay sy ny mitovy kambana, fa tsy misy amin'izy ireo no momba.
4:3 Ny molony dia tahaka ny jaky kofehy, ary ny fahaiza-miteny no mamy. Toy ny tapa-ampongabendanitra, toy izany koa ny takolany, afa-tsy zavatra takona ao anatin'ny.
4:4 Ny vozonao dia tahaka ny tilikambon'i Davida, izay naorina tamin'ny manda: Ampinga arivo no mihantona avy izany, rehetra ny fiadiana ny mahery.
4:5 Ny nononao roa dia toy ny tanora roa no, kambana izay miraoka ahitra eny amin'ny lilia.
4:6 Mandra-pihavin'ny andro miakatra sy ny aloka mandà, Handeha ho any amin'ny tendrombohitry ny miora sy ny havoan'ny ditin-kazo manitra.
4:7 Tsara tarehy ianao tanteraka, ry tiako, ary tsy misy tsiny eo aminao.
4:8 Advance avy any Libanona, ny vadiko, mandroso avy any Libanona, hampandroso. Dia ho satroboninahitra teo amin'ny lohany ny Amana, akaikin'ny tampon'i Senira sy Hermona, avy amin'ny lavaka ny liona, avy an-tendrombohitry ny leoparda.
4:9 Efa naratra ny foko, anabaviko, ny vadiko. Efa naratra ny foko tamin'ny fijery ny masonao, ary tamin'ny iray hidin-trano ny volo eo amin'ny vozonao.
4:10 Tsara tarehy erỳ ny nono, anabaviko, ny vadiko! Ny nono tsara tarehy kokoa noho ny divay, Ary ny fofon'ny menaka ny dia ambonin'izy rehetra menaka manitra.
4:11 Molotrao, ny vadiko, dia toho-tantely mitete; tantely sy ronono no ao ambanin'ny lelanao. Ary ny fofon'ny fitafianao dia tahaka ny hanitry ny ditin-kazo manitra.
4:12 Ny zaridaina fonosina Anabaviko, ny vadiko: ny fonosina zaridaina, voaisy tombo-kase loharano.
4:13 Maniraka ny paradisa ny ampongaben-danitra miaraka amin'ny vokatry ny saham-: Kypreso voaloboka, miaraka amin'ny menaka manitra;
4:14 menaka manitra sy safrona; veromanitra sy havozomanitra, amin'ny rehetra ny hazo any Libanona; miora sy Aloe, ny tsara indrindra amin'ny menaka rehetra.
4:15 Ny loharanon 'ny zaridaina dia miboiboika, izay mikoriana amin-kery avy any Libanona.
4:16 Mitsangàna, rivotra avy any avaratra, ary mialoha, rivotra avy any atsimo. Alefaso ny tsio-drivotra amin'ny alalan'ny ny zaridaina, ary hitondra ny manitra fofona manitr'ireo.
Tonon-kiran'i Solomona 5
5:1 Ampakarina: Enga anie ny malalako hiditra an-tanimboliny, ka hihinana ny vokatry ny paoma hazo.
5:2 Mpampakatra amin'ny Ampakarina: Efa tonga tao ny zaridaina, Ry anabaviko, ny vadiko. Efa vokatra ny miora, miaraka amin'ny menaka manitra. Efa homana ny toho-tanteliko mbamin'ny tanteliko. Efa nisotro ny divay miaraka amin'ny ronono. Mihinàna, O namana, sy misotro, ka ho mamo, Ry ilay malala.
5:3 Ampakarina: matory aho, nefa ny foko fiambenana. Ny feon'ny malalako mandondòna:
5:4 Mpampakatra amin'ny Ampakarina: Vohay, anabaviko, ry tiako, izay ny, ny immaculate iray. Fa ny lohako dia feno ando, ary ny foto-bolo ny voloko dia feno no miteraka ny ny alina.
5:5 Ampakarina: I: Efa niala akanjo aho; ahoana no hitafy izany? Efa nanasa ny tongotro; hataoko ahoana no hamabo azy?
5:6 Ny malalako hametraka ny tànany avy teo amin'ny varavarankely, sy ny maha izy dia nifindra tamin'ny mikasika.
5:7 Nitsangana mba hamoha varavarana ny malalako. Ny tanako nitete miora, ary ny rantsan-dia feno tsara indrindra miora.
5:8 I nanokatra ny Bolt ny varavarana ny malalako ihany aho. Fa efa nivily ka efa lasa. Ny fanahiko levona ireny rehefa niteny. Nitady azy aho,, dia tsy nahita azy. Niantso aho, ary tsy hamaly ahy.
5:9 Ny mpiandry izay mivezivezy eny an-tanàna amin'ny alalan'ny ahy. Dia namely ahy, ka nandratra ahy. Ny mpiambina ny manda nitondra ny voaly hiala amiko.
5:10 I hamatotra anao amin'ny fianianana, Ry zanakavavin'i Jerosalema, Raha hitanareo re ny malalako, manambara ho azy fa reraka amin'ny fitiavana.
5:11 Chorus ny ampakarina: Inona no karazana ny malalako, dia ny malalanao, Ry tsara tarehy indrindra amin'ny vehivavy? Inona no karazana ny malalako, dia ny malalanao, mba ho hamatotra antsika amin'ny alalan'ny fianianana?
5:12 Ampakarina: Ny malalako dia sady fotsy mangatsakatsaka no mena, olom-boafidy eo amin'ny an'arivony.
5:13 Ny lohany dia toy ny volamena tsara indrindra. Ny milantolanto dia ho tahaka ny havoana ny hazo rofia, ary toy mangilohilo toy ny goaika.
5:14 Ny masony dia tahaka ny voromailala, izay efa mandro amin'ny ronono ny rivulets ny rano, ary izay mitoetra akaikin'ny renirano mahavokatra.
5:15 Ny takolany dia tahaka ny kianjan'ny manitra zava-maniry, voafafy ny mpangaroharo zava-manitra. Ny molony dia tahaka ny lilia, mitete ny tsara indrindra miora.
5:16 Ny tenany dia Voalaminay volamena, feno hyacinths. Ny kibony no ivoara, mitendro amin'ny safira.
5:17 Ny ranjony dia andry vato marmora fotsy, izay efa nanorina ny fototry ny volamena. Ary ny fijery azy dia tahaka ny an'i Libanona, Mifidy toy ny sedera.
5:18 Ny tendany tena mamy, ary izy no tanteraka tsara. Toy izany ny malalako, ary izy no namako, Ry zanakavavin'i Jerosalema.
5:19 Chorus ny ampakarina: Nankaiza ny malalanao, Ry tsara tarehy indrindra amin'ny vehivavy? Ho aiza no malalanao nivily, ka mba hitady azy miaraka aminao?
Tonon-kiran'i Solomona 6
6:1 Ampakarina: Ny malalako dia nidina an-tanimboliny, ho amin'ny kianjan'ny manitra zava-maniry, mba hiraoka ahitra eny an-tsaha sy hioty ny lilia.
6:2 Raha izaho, dia malalako, ary ahy ny malalako dia ho ahy. Izy saha fiandrasana eny amin'ny lilia.
6:3 Mpampakatra amin'ny Ampakarina: Ry tiako, tsara tarehy ianao: mamy sy tsara tarehy, toa an'i Jerosalema; mahatahotra, toy ny antokon'ny miaramila amin'ny ady voaomana.
6:4 Hisorohana ny maso tsy hijery ahy, satria efa nahatonga ahy manidina. Ny volonao dia tahaka ny osy andiany, izay efa niseho avy tany Gileada.
6:5 Ny nifinao dia tahaka ny ondrivavy andiany, izay efa niakatra avy eo amin'ny fampandroana, ny tsirairay sy ny mitovy kambana, fa tsy misy amin'izy ireo no momba.
6:6 Toy ny hoditry ny ampongabendanitra, toy izany koa ny takolany, afa-tsy noho ny hiddenness.
6:7 Misy mpanjakavavy enim-polo, ary ny vaditsindrano valo-polo, ary ny ankizivaviny tsy hita isa.
6:8 Ny iray no voromailalako, ny kilema. Ny iray dia ny reniny; olom-boafidy no izy izay niteraka azy. Ny zazavavy nahita azy, Koa dia nanendry azy fitahiana. Ny mpanjakavavy sy ny vaditsindrano nahita azy, ka nidera azy.
6:9 Chorus ny Mpampakatra: Fa iza io, izay mandroso tahaka ny fiakaran'ny maraina, ho tsara tarehy tahaka ny volana, araka ny olom-boafidy toy ny masoandro, ho mahatahotra toy ny antokon'ny miaramila amin'ny ady voaomana?
6:10 Ampakarina: Dia nidina ho any amin'ny saha ny voa, mba hahita ny vokatry ny an'ilay fiakarana, be lohasaha, ary mba handinika raha efa Niroborobo amin'ny tanim-boaloboka sy ny ampongaben-danitra efa namoaka tsiry.
6:11 Tsy azoko. Ny fanahiko dia namporisika ato anatiko noho ny kalesy Aminadaba.
6:12 Chorus ny ampakarina: Miverena, hiverina, O Sulamitess. Miverena, hiverina, ka mba hihevitra anao.
Tonon-kiran'i Solomona 7
7:1 Chorus ny Mpampakatra: Inona no ho hitanao ao amin'ny Sulamitess, afa-tsy choruses ny tobiny?
7:2 Chorus ny ampakarina: Tsara tarehy erỳ ny dian-tongotrao ao amin'ny kiraro, Ry zanakavavy mpanapaka! Ny tonon-taolana ny feny Dia tahaka ny firavaka, izay efa noforonina 'ny tanan' ny mpanakanto.
7:3 Ny foitrany dia vilia baolina boribory, na oviana na oviana tsy ampy amin'ny curvature. Ny kibony dia tahaka iray trotroana vary, manodidina amin'ny lilia.
7:4 Ny nononao roa dia toy ny tanora roa kambana no.
7:5 Ny vozonao dia tahaka ny tilikambo ivory. Ny maso toy ny trondro dobo tao Hesbona, izay eo amin'ny fidirana ho any amin'ny zanakavavin'i ny vahoaka. Ny oronao dia tahaka ny tilikambo any Libanona, izay manatrika nivoaka nankany Damaskosy.
7:6 Ny lohanao dia tahaka an'i Karmela, ary ny volon-dohanareo dia tahaka ny lamba volomparasy, avy ny mpanjaka, mifatotra ho pleats.
7:7 Tena malala iray, Inona no tsara tarehy ianao, sy ny tsara tarehy amin'ny nahafinaritra!
7:8 Ny halavany dia ampitahaina amin'ny hazo rofia, ary ny nononao amin'ny sampahom-boaloboka.
7:9 Mpampakatra: Hoy aho hoe, Dia hiakatra ho any ny rofia, ary mitana ny vokatra. Ary ny nononao ho toy ny sampahom-boaloboka eo amin'ny voaloboka. Ary ny fofon'ny vavanao dia ho tahaka ny paoma.
7:10 Ampakarina: Ny tendany toy ny divay tsara indrindra: divay mendrika ny malalako ny misotro, sy ny molony sy ny nify mba mandinika.
7:11 Raha izaho, dia malalako, ary ny fiovana dia ny ahy.
7:12 Fomba, malalako. Andeha isika hivoaka any an-tsaha; aoka isika maharitra ao an-tanàna.
7:13 Andeha isika hiakatra any amin'ny maraina amin'ny tanim-boaloboka; Aoka hoe hizahantsika na amin'ny tanim-boaloboka dia Niroborobo, raha ny voninkazo dia vonona ny mamoa, raha ny sarin'ampongaben-danitra efa Niroborobo. Ao no hanome an-tratrako ho anao.
7:14 Ny dodaiman'ny hilefitra ny hanitra avy. Any am-vavahadiny izay rehetra vokatra. Ny vaovao sy ny tranainy, malalako, Izaho efa nitandrina ho anao.
Tonon-kiran'i Solomona 8
8:1 Ampakarina ny Mpampakatra: Iza no hanome anareo ho ahy tahaka ny anadahiko, nanome sakafo avy amin'ny nono ny reniko, ka mba hahita anareo ivelany, ary mba hanoroka anao, ary toy izany koa izay ankehitriny tsy hisy hanao tsinontsinona ahy?
8:2 Dia hihazona anao sy hitarika anao ho any an-tranon'ny. Any no hampianatra ahy, fa Izaho no hanome anareo eran'ny kapoaka nasiana zavamanitra mampahatsiro azy divay, sy ny ranom-boaloboka avy ny ampongabendanitra.
8:3 Aoka ny tànany ankavia ambanin'ny lohako, Ary ny tànany ankavanana dia hanaiky ahy.
8:4 Mpampakatra ny Chorus: I hamatotra anao amin'ny fianianana, Ry zanakavavin'i Jerosalema, tsy mba hanelingelina na mamoha ny malala, mandra-tiany.
8:5 Chorus ny Mpampakatra: Fa iza io, izay niakatra avy any an-efitra, tondra-nahafinaritra, mitehina amin'ny malalany?
8:6 Mpampakatra amin'ny Ampakarina: Eo ambanin'ny hazo paoma, I nifoha anao. Tsy dia simba ny reninao. Tsy izy izay niteraka anao dia nandika.
8:7 Ataovy toy ny tombo-kase aho eo am-ponao, toy ny tombo-kase eo amin'ny sandrinao. Fa ny fitiavana no mahery, toy ny fahafatesana, sy ny fialonana no maharitra, toy ny helo: ny lela fanaovan-jirony dia vita amin'ny afo sy ny lelafo.
8:8 Ary ny vahoaka ny rano dia tsy afaka hamono ny fitiavana, tsy afaka ny renirano hanafotra azy. Raha misy olona dia ny hanome ny fananana rehetra ao an-tranony ho takalon'ny fitiavana, dia ho toy ny tsinontsinona izany na inona na inona.
8:9 Chorus: Ny anabaviny kely sy tsy manan-nono. Inona no hataonay amin'ny zandrivavinay amin'ny andro, saingy efa niantso?
8:10 Raha manda izy, andeha isika hanangana tovon-tany fiarovana ny volafotsy teo aminy. Raha izy no varavarana, Aoka isika hiaraka izany miaraka amin'ny hazo fisaka sedera.
8:11 Ampakarina ho Chorus: Mànda aho, Ary ny nononao dia tahaka ny tilikambo, satria, eo anatrehany, Efa tonga tahaka ny anankiray izay efa nahita fiadanana.
8:12 Ny iray am-pilaminana nanana tanim-boaloboka, in izay nihazona ny firenena. Dia nanolotra azy teo ho any amin'ny mpikarakara; nisy lehilahy iray nitondra, ho takalon'ny ny vokatra, iray sekely volafotsy arivo.
8:13 Mpampakatra: Ny tanim-boaloboko eo anatrehako. Ny arivo no isan'ny hamonjena anareo ny fihavanana, ary ny roan-jato ho an'ireo izay mikarakara ny vokatra.
8:14 Ampakarina ny Mpampakatra: Ny namana hihaino tsara ireo izay efa nonina eny an-tsaha. Mahatonga ahy hanaraka ny feonao.
8:15 Mandositra, malalako, ary ho lasa tahaka ny Doe sy ny tanora serfa eny an-tendrombohitra ny zava-maniry manitra.